mafuta Wash izvi ndizvo zvigadzirwa zvedu zvatiri kunyanya kudada nazvo. Ndiani Mirosław Serba pachiitiko chePoland modelling, hapana chikonzero chekutsanangura. Munhu ane tarenda murume, modelling muoni, uye modhi ane ruzivo rwakakura. Mukundi we, pakati pevamwe, Modeling Oscar muna 2018 kuPoland Model Show. Unogona kuzvida kana kwete, asi sezvaanotaura, haisi nyanya ......
Nhasi, pakati pehusiku, imwe vhidhiyo pane Agtom chiteshi yakabhururuka ichibva mukuvakwa kwetangi 7TP - IBG 1:35, nhau kubva kudanga reBG. Tomek akapa hunyanzvi hwekushandisa pendi wash bhurasho remhepo. Ndatenda nekusarudza chigadzirwa chedu! Unogona kutarisa bhaisikopo pane iyi link iripazasi.
Masangano pamutambo muJaworzno
Iwe unoda here kuona yakanakisa modhi yakagadzirwa neyakareruka uye inozivikanwa Tamiya seti ichibuda kubva kuna tenzi ruoko? Kubva zero kusvika kugamba, ndizvo zvatakadaidza musangano watichakuratidzira pamwe chete naMirosław Serba pamutambo wekuenzanisira muJaworzno! Munguva pfupi, munaGunyana 12, chete kune vanoona vanorarama mukana wakanaka wekukwira kuenda padanho repamusoro, ...
Nhau kubva kuModeller World Kukadzi 2020
Mugore idzva, tiri kutanga nezvinyorwa zvitsva uye, senguva dzose, nzira yekuvandudza yezvigadzirwa zvemamodheru. Nekudaro, iye nezvake, tinoda kukutendai nekutambirwa kwakanyanya kweveModeller World brand, yakatangwa pamusika pakati pa2019. Isu hatina kutarisira rumbidzo zhinji uye mazwi ekutenda, nekuti kunyangwe isu taiziva izvozvo ...
Masango ekunze aine pigments
Bhaisikopo naMirek Serba, tinokukoka iwe kuti ude fan fanpage yaMirek inogona kuwanikwa pairi chinongedzo: https://www.facebook.com/BEARMODELING/
Isu tiri pane iyo Scale hangar 182 chiteshi!
Imwe nguva yapfuura ndakanyara kunyorera Dawid, muvambi weScalhangar182 chiteshi, kuti angave achida kuedza zvigadzirwa zvitsva zvePoland. Dawid, Pole anogara zvachose muUK, akabvuma uye ... Ini ndinofunga aifarira zvigadzirwa zvedu kusvika padanho rekuti akasarudza kuzviisa mumutambo wake ire. Dawid murume akatendeseka uye ane hushamwari murume, ...
Modelling pane Portuguese Portuguese
Ino nguva, maModeller siuwaksy vasvika kuPortugal! Ona uye nyorera kune iyo Alexa chiteshi, tarenda modhi achiwana akawanda uye mazhinji mafeni paYouTube! Pazasi peiyo vhidhiyo iyo yavakaverengerwa muchiito washe Modellers Nyika.
Buba Wagon Basa rakasviba KW-1 Modellers!
Maonero ese uye ongororo yega yega yakakosha zvakanyanya. Kana chigadzirwa chikabatwa nemunhu anokudzwa saiye ane tarenda modhi anozivikanwa kune vese, moyo unokura uye anodedera nemanzwiro 😉. Ngatitarisei kuti ndezvipi zvakaonekwa naRafał Kubić pakuyedza iyo siuwaxy Modellers World paKW-1, yaive nyaya yemusangano wake paIV Poland Model Show. Kune avo vasingazive mabasa aBuba, ini ndinokurudzira zvinotevera ...
Patryk Models Workshop paModellers - aizvifarira here?
Patryk Manikowski, munyori webhusaiti yePatryk Models Workshop, ndiye aive munhu wekutanga muPoland, uye munhu wekutanga zvachose, kugamuchira zvigadzirwa zveModeller World kuti zviongororwe. Ini ndaida maonero ake nekuti munhu akavimbika uye ndinoziva kuti kana paine chakange chakanganisa, aindiudza nezvazvo. Akanditsigira uye kundifadza kubva pakutanga chaipo, ...
Navigation mushure mokupinda
peji 1 peji 2 peji 3 ... peji 6
Chitoro chedu paAllegro SMART!
Mari	 EUR	GBP	USD	PLN